Big City Small World (Series2Episode6- Welcome back Johnny!) - Myanmar Network
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 15:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode6- Welcome Back Johnny! (အတွဲ (၂)၊ အပိုင်း (၆) - ကြိုဆိုပါတယ် Johnny!)
Series2Episode6- Welcome Back Johnny! ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Johnny is back! But is he back for good? And Carlos is going to tell us something really important...
(Johnny ပြန်ရောက်လာပြီ! သို့သော် သူဟာ အပြီးအပိုင် ပြန်လာခြင်းလား? ပြီးတော့ Carlos ကလည်း အမှန်တကယ် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုခုကို ပြောမှာလား…)
All: Johnny! Welcome back! Great to see you again!
(Johnny! ကြိုဆိုပါတယ်ကွာ! ပြန်ဆုံရတာ ၀မ်းသာပါတယ်!)
Johnny: It’s great to be back!
Olivia: Are you just back foravisit?
Johnny: No! I’m staying!
Fadi: Great news!
Johnny: Yeah –aposition came up with my company back in London – I applied for it, and, well, here I am!
(ဟုတ်တယ် ¬ လန်ဒန်က ငါ့ကုမ္ပဏီမှာ ရာထူး တစ်နေရာပေါ်လာတယ်လေ – ငါလျှောက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ကဲ ငါပြန်ရောက်လာပြီလေ!
Olivia: How did it go in China?
Johnny: Great! It was really good to be back. I did really well in my job...
(သိပ်ကောင်းတာပေါ့! ပြန်ရောက်သွားတာ အရမ်းကို ကောင်းတာပဲ အလုပ်ထဲမှာလည်ူး ငါကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်...)
Magda: You always talk about your job!
(နင်က နင့်အလုပ်အကြောင်းပဲ အမြဲပြောတယ်!
Johnny: Hey! My career is important to me!
(ဟေး! ငါ့အလုပ်က ငါ့အတွက်အရေးကြီးတယ်!)
Sarah: Oh, I’mabit jealous of you... I’d love to go back home to visit my family and friends. I haven’t been back for ages now...
(အိုး – ငါလေ နင့်ကို နည်းနည်းတောင်မနာလိုဖြစ်တယ်... ငါလည်း မွေးရပ်မြေုပန်ပြီး မိသားစုတွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီကို အလည်သွားချင်တယ်၊ မရောက်တာ နှစ်နဲ့ချီနေပြီ...)
Johnny: Yeah... you should go...
Olivia: So you’re back for good?
Johnny: Forayear, at least... then we’ll see!
(လောလောဆယ်တော့ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ပဲ… နောက်တော့ ထပ်ကြည့်ကြတာပေါ့!)
Harry: Oh, by the way – this is Bindyu – she’s my girlfriend...
(အော်၊ ဒါနဲ့ စကားမစပ် – ဒါက Bindyu လေ– သူက ငါ့ရည်းစားလေ…)
Johnny: Nice to meet you! Well done, Harry...
(တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ မင်းတော်တယ် Harry...)
Bindyu: Nice to meet you, too.
Fadi: We’ll have to start the football team again!
(ဟိုင်းပါ Carlos ရေ!)
Carlos: Oh, hi! Hi, Sarah!
(အို ဟိုင်းဟိုင်း ပါ Sarah!)
Harry: Johnny – this is our new Brazilian friend, Carlos.
(Johnny – ဒါငါတို့ရဲ့ ဘရာဇီးလူမျိုး သူငယ်ချင်းအသစ်လေ Carlos တဲ့)
Johnny: Hi Carlos! You’re Brazilian? You must be good at football... join our team!
(ဟိုင်းပါ Carlos! မင်းက ဘရာဇီးလူမျိုးလား? ဒါဆိုရင်တော့ ဘောလုံးကစားတာတော်မှာပဲ… ငါတို့အသင်းကို ၀င်ပါလား!)
Carlos: Erm, well, actually, I’m afraid I’m no good at football...
(အာ ။ အင်း။ တကယ်တော့ ပြောရမှာ အားနာပါတယ်။ ငါဘောလုံးကောင်းကောင်းမကန်တတ်ဘူး…)
Johnny: Well, you’ll fit in with our team, then!
(ကဲ ဒါဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်တို့ အသင်းနဲ့ အံကိုက်ပဲ!)
Harry: Never mind, Carlos, it’s not important...
(ကိစ္စမရှိပါဘူး Carlos အဲ့ဒါ အရေးမကြီးပါဘူး…)
Johnny: So what’s been going on here while I’ve been away?
(ကဲ ဒါဆိုငါမရှိတုန်း ဘာတွေဖြစ်နေကြလ?)
All: Er, well... hmmm...
Harry: Lots of stuff.
Johnny: Go on! I saw that banner in the window – what’s up? Why do you need to save the café?
(ပြောပါ။ ငါ ပြတင်းပေါက်က နဖူးစည်းစာတမ်းကို တွေ့ခဲ့တယ် – ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? ဘာလို့ မင်းတို့ ကော်ဖီဆိုင်ကို ကယ်ဖို့လိုနေတာလဲ?)
Olivia: And my shop...
Harry: Well, did you see that building site just behind the café?
(အင်း။ မင်း ကော်ဖီဆိုင်အနောက်က အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းခွင် ကို တွေ့ခဲ့လား?)
Johnny: Yes, I did actually – it looks like they’re building something big, looks interesting...
(အင်း၊ တွေ့ခဲ့တယ် – သူတို့ တစ်ခုခုကြီးကြီးမားမားကို ဆောက်နေတဲ့ပုံပဲ။ ကြည့်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်...)
Harry: Yeah, luxury flats...
Olivia: The problem being...
Tony: ...they want to knock down the café!
(...သူတို့က ကော်ဖီဆိုင်ကို ဖြိုချချင်တယ်!)
Olivia: And my shop.
Sarah: But don’t worry!
Harry: We gotacampaign going – the banner in the window...
(ငါတို့ လှုပ်ရှားမှုလုပ်နေတယ်လေ – ပြတင်းပေါက်က နဖူးစည်းစာတမ်း...)
Bindyu: And I wrote an article in the local paper!
(ပြီးတော့ ငါလည်း ဒေသခံသတင်းစာထဲမှာ ဆောင်းပါးရေးထားတယ်!)
Sarah: We found they’re historic buildings – so it’s not legal to knock them down.
(ငါတို့က ဒီအဆောက်အဦးတွေက သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦးတွေဆိုတာ သိခဲ့တယ် – အဲ့ဒီတော့ ဖြိုချတာက တရားမ၀င်ဘူး)
Johnny: Don’t worry anyhow - I’m rich enough now! I could buy the café, and your shop, Olivia, then do what I want...!
(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မပူပါနဲ့... ငါအတော်အသင့် ချမ်းသာနေပါပြီ! ငါကော်ဖီဆိုင်ရော နင့်ဆိုင်ကိုပါ ၀ယ်လိုက်နိုင်ပြီ Olivia ရေ ပြီးတော့ ငါလုပ်ချင်တာ ငါလုပ်လို့ရပြီ…)
Johnny: Er, well, no, actually, probably not. Just joking, you know. But I will be rich enough inacouple of years...!
(အော်၊ အင်း အမှန်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်နေတာပါ သိတယ်မဟုတ်လား ဒါပေမယ့် နောက် နှစ်အနည်းငယ်အတွင် ချမ်းသာလာတော့မှာပါ...!)
Harry: Yeah, right.
Carlos: Listen guys, that was what I came to talk to you about. At lunch today – I’macaterer, Johnny, I make lunch for all the people who work on the building site next door...
(ဒီမှ ကိုယ့်လူတို့ အဲဒီအကြောင်းပြောဖို့ ကျွန်တော်လာခဲ့တာ။ ဒီနေ့ နေ့လည်စာ စားချိန်က – Johnny ရေ ကျွန်တော်က တော့ အစားအသောက် စီစဉ်သူ တစ်ယောက်ပါ ဘေးက ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးအတွက် နေ့လည်စာ စီစဉ်ပေးရတာ...)
Johnny: I see...
Carlos: ...well, there were two of the top managers there.
(...အင်း အဲ့ဒီမှာ ထိပ်ပိုင်းက မန်နေဂျာ ၂ ယောက်ရှိတယ်)
Olivia: Oh yeah?
Carlos: Well, I didn’t listen to them, exactly...
(အင်း တကယ်တော့ ကျွန်တော်က သူတို့ကို နားထောင်နေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး…)
Sarah: Of course not!
Carlos: No, but... I heard what they were saying...
(မထောင်ပါဘူး ဒါပေမယ့်… သူတို့ဘာပြောနေလဲဆိုတာကို ကြားခဲ့တယ်…)
Olivia: And what were they saying?
Carlos: They were saying...
Tony: Oi! Johnny! Are you going to buy something? If you want to haveaparty go back to your house! I runabusiness here, you know...
(Johnny ရေ! မင်း တစ်ခုခု ၀ယ်မှာလား? မင်းပါတီပွဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မင်းအိမ်မင်းပြန်! ငါက ဒီမှာ စီးပွားရေးလုပ်နေတာ မင်းသိတယ်နော်...
Johnny: Oh sorry, Tony – yeah, could I haveacoffee please?
(အို တောင်းပန်ပါတယ် Tony ရယ် – ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးပြု၍ ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက် ရနိုင်မလား?)
Olivia: Tony! Please...Carlos is going to tell us something really important...
(Tony! တစ်စိတ်လောက်… Carlos က ကျွန်မတို့ကို အရေးကြီးတာ တစ်ခုခု ပြောမလို့…)
Olivia: That’s what we’re going to find out...! Carlos... go on!
(အဲ့ဒါကို သိဖို့ ကျွန်မတို့ ကြိုးစားနေတယ်လေါ…! Carlos… ဆက်ပြောပါဦး!)
Carlos: The managers, they were saying, that they know these buildings – the café, and your shop – they know they’re historic buildings, and they know they can’t knock them down...
(မန်နေဂျာတွေက ဒီကော်ဖီဆိုင်နဲ့ နင့်ဆိုင်က သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးတွေဆိုတာ ရယ်၊ သူတို့ ဖြိုချလို့မရဘူးဆိုတာရယ်ကို သိတယ်…)
Magda: Yes... that’s what I found out... I told Bindyu... she put it in the paper...
(ဟုတ်တယ်... ငါဒါကို သိခဲ့တယ်လေ... နင့်ကိုပြောသားပဲ Bindyu... သူမက သတင်းစာထဲ ထည့်ရေးလိုက်တာလေ...)
Carlos: Yes – they’ve read the newspaper, they said. They know there’s nothing they can do...
(ဟုတ်တယ် – သူတို့ သတင်းစာလည်း ဖတ်ပြီးပြီလေ။ သူတို့ပြောတာက သူတို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တာ သူတို့သိတယ်တဲ့...)
Carlos: So... they’re not going to knock them down! The campaign wasasuccess! You’ve won!
(အဲဒီင်္တော့…. သူတို့က မဖြိုချတော့ဘူးလေ! လှုပ်ရှားမှုလုပ်တာ အောင်မြင်တယ်။ နင်တို့နိုင်ပြီ!)
Permalink Reply by Yin Min Myint Z∂w on January 29, 2013 at 20:20
Permalink Reply by Soe Soe on January 30, 2013 at 1:19
Permalink Reply by KHIN MYAT THU on January 30, 2013 at 10:23
VERY INTERESTED TOPIC. THANKS
Permalink Reply by aung lwin on January 30, 2013 at 11:14
Permalink Reply by venus on September 18, 2013 at 8:50